Three International Expos to be Held at Yangon Convention Center | Myanmar Business Today
Home Business Local Three International Expos to be Held at Yangon Convention Center
By Ei Thandar Tun/Myanmar Business Today
Three international expositions will be held at Yangon Convention Center, Inya Lake Hotel, from November 1 to 4: The 8th Myanmar International Textile & Garment Industry Exhibition (MTG), Myanmar International Plastics, Rubber, Printing, Packaging Industrial Exhibition (Myanmar PlasPrintPack) and Myanmar International Agriculture & Food Industry Exhibition (Myanmar Agrotek Foodtek).
Businesses from China, India, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Thailand and Vietnam will exhibit their products. The type of products to be displayed are plastics, rubber, printing and packaging, agricultural technologies and food stuffs.
“This is the eighth expo. There will be around 200 exhibition booths. These kind of expos will provide opportunities and bring new technology to local businessmen while connecting them with international businesses,” said U Kyaw Min, President of Myanmar Pulp and Paper Industry Association (MPPIA).
Companies will showcaseawide range of high-caliber industrial machinery equipment and advanced technologies within these five specific industrial sectors. These will include Haitian, bringing the latest injection and CNC technologies; Bimetal, showcasing top-tier extruders and screw barrels; SUNTEX, demonstratinganew machinery line and laser cutting service; CHUNG SHAN, displaying form-fill-seal packing machinery and innovative solutions for the food industry; AUGER, offering automatic bag forming packaging machines and technology; and SPATHA, showcasing brush cutters and gasoline generators.
At the Myanmar Textile & Garment Industry Exhibition (MTG), there will be more than 135 exhibitors from 13 countries and regions including China, France, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Myanmar, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam. Exhibitors from these countries will be showcasing textile and garment machineries to meet the domestic demand in Myanmar. Organizers of the event expect to seeatotal of 8,600 visitors at the exhibitions.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၈ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ချည်မျှင်နှင့် အထည်အလိပ်နှင့်အဝတ်အစားဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်စက်မှုလက်မှုပြပွဲ ၊ နိုင်ငံတကာ ပလပ်စတစ်၊ ရော်ဘာ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ စက်မှုပြပွဲနှင့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းပြပွဲတို့ကို YCC ခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းပြပွဲများကို အင်းလျားလိတ်ဟိုတယ်ဝင်းအတွင်းရှိ ရန်ကုန်ကုန်သွယ်ရေးစင်တာတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့မှ ၄ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်ပြသမည့် မြန်မာ့ပလပ်စတစ် ရော်ဘာ ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်ပိုးမှုဆိုင်ရာ စက်မှုပြပွဲ၊ နှင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် စားသောက်ကုန်ဆိုင်ရာ ပြပွဲတွင် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်အစရှိသည့် နိုင်ငံများမှ ဝင်ရောက်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
“ အခုပြပွဲက ၈ ကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲမှာ ပြခန်းပေါင်း ၂၀၀လောက် ပြသသွားမှာ။ ဒီလိုပြပွဲတွေ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာက နည်းပညာများကို မြင်တွေ့ခွင့်ရသလို လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်း တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ချဲ့ထွင်လုပ်ကိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ပျော့ဖတ်နှင့် စက္ကူလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမှ ဥက္ကဌ ဦးကျော်မင်းက ပြောသည်။
အဆိုပါပြပွဲတွင် high-caliber extruders နှင့် CNC technologies များဖြစ်သော Haitian နှင့် Bimetal ၊ အိတ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ နှင့် ထုတ်ပိုးမှုပိုင်းဆိုင်ရာများပြသသွားမည့် Auger နှင့် Chung Shan ၊ Suntexမှ လေဆာကတ်တင်လိုင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာများအစရှိသည်တို့ကို ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ချည်မျှင်နှင့် အထည်အလိပ်ဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုပြပွဲနှင့်နိုင်ငံတကာ အထည်အလိပ်နှင့် အဝတ်အစားပိုင်ဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများပြပွဲတို့တွင် စက်ပစ္စည်းများနှင့် ဆန်းသစ်ထားသော စက်ပစ္စည်းများ၊ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များအတွက် နည်းပညာများနှင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါပွဲတွင် တရုတ်၊ ပြင်သစ်၊ ဟောင်ကောင်၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ စင်ကာပူ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ် အစရှိသည့် နိုင်ငံများမှ ပြပွဲတွင် အထည်ချုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အစားပြုလုပ်စက်များ၊ စက်ချုပ်စက်များ၊ ချဉ်ထိုးပန်းထိုးစက်များ၊ ဒီဂျစ်တယ်ပုံရိုက်ထုတ်စက်များ၊ ချည်ထည်များ၊ ကြိုးလွန်းများနှင့် အပိုပစ္စည်းများအစရှိသည်တို့ကို ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။ ပြပွဲကို လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း ၁၃၅ဦးတို့မှ လာရောက်ပြသမည်ဖြစ်ပြီး ပြပွဲသို့ လာရောက်လေ့လာသူ ၈၆၀၀ကျော်ရှိမည်ဟုတ် ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
Previous articleMicrosoft Rides Cloud toa21% Increase in Profits
Next articleMyanmar Expects $200 Billion FDI Over the Next 20 Years